China 95% Alumina Ceramic Lining & Steel Pipeline Kpọtụrụ Na China Factory factory na suppliers | YUNFENG
95% Alumina Ceramic Lining & Steel Pipeline Kpọtụrụ Site na Factlọ Ọrụ China
* Were ebe ngwa: Mpaghara ngwa: Mmanụ, Ngwuputa, igwe igwe, osisi ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'elu akụrụngwa ma ọ bụ ihe na-ebute mmiri mmiri na-asọ site na ngwongwo na-eguzogide ọkpọkọ, mmetụta dị ukwuu na-arụ ọrụ nke ọma na-emetụta mmetụta nke mmetụta nke mgbidi ihe gafere. * Product atụmatụ: Akọrọ ịpị ịkpụzi, elu okpomọkụ, na Rockwell ekweghị ekwe HR80-90, nke abụọ naanị ka diamond. Ihe ndị chọrọ nlebara anya maka njem na ntinye nke seramiiki ...
Ihe ndị chọrọ nlebara anya maka njem na ntinye nke ọkpọ seramiiki
1. The seramiiki mejupụtara anwụrụ nwere nnukwu ekweghị ekwe na ezi ike, ma ọ ga-etinye nwayọọ na usoro nke njem na echichi zere oké nkukota, karịsịa iji zere kpọmkwem kọntaktị na metal ngwá ma ọ bụ mmetụta na seramiiki oyi akwa na njedebe elu.
2. The yunfeng ekwe anwụrụ arụnyere na directivity. Mgbe arụnyere ọkpọkọ ụgbọ ahụ, ntụzịaka egosiri na akụ dị n'elu igwe ekwe kwesiri ikwekọ na ntụgharị usoro nke usoro mgbasa ozi.
3. Mgbe ị na-etinye ọkpọkọ ahụ, a ga-eme ka ọkpọkọ ahụ kwekọọ na etiti etiti na ọkwa kwesịrị idozi iji jide n'aka na njedebe abụọ ahụ ga-ezute n'ụzọ ziri ezi.Mgbanwe nke isi abụọ kwesịrị ịchịkwa n'ime 1.0mm.
4. Mgbe ejiri ngwongwo na-agbanwe agbanwe iji jikọọ ma wụnye ọkpọkọ ahụ, a ga-edozi ogologo nke etinyere nke ngwụcha abụọ nke ọkpọkọ na-agbanwe agbanwe. Ebe ọ bụ na ọnụọgụ mgbasawanye nke ọkpọkọ ahụ bụ ihe dị ka 1/3 nke nchara , mmeba mmezi nwere ike belata 3-5mm.
5. Mgbe ị na-eji njikọ Flange, njedebe flange ga-ekpochapụ na njedebe nke ọkpọkọ mejupụtara.
6. N'ihi arụmọrụ kachasị mma nke ịgbado ọkụ nke ọkpọkọ mejupụtara, njikọ ọkpọkọ nwere ike ịmalite site na ịgbado ọkụ. Otú ọ dị, mgbe ịgbado ọkụ, ụdị mkpọda 45o-60o "V" dị n'akụkụ 2-4mm na oghere dị 0.8-1.2mm.
Nke gara aga: Efere Ceramic Na-agbakọta maka Ngwuputa
Osote: Hexagonal Efere eyi-eguzogide ọgwụ Liner Hopper eyi Efere Liner efere Kol Hopper